Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu baaqay Yementa go.doonsan in ay u cararaan dalkiisa .. !! * | Somalisan.com kala soco wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu baaqay Yementa go.doonsan in ay u cararaan dalkiisa .. !! *
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa sheegay in uu aad uga xumaaday xaaladda sii xumaaneysa ee Yemen, laakiin wuxuu sheegay in waddanku uusan iloobi doonin taageerada ay u hayaan dadka Yemen si ay u soo dhaweeyaan kumanaan qaxooti Soomaali ah ka hor.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegay in Yaman iyo dadkeeduba ay tahay inay istaagaan oo ay yiraahdaan in irdaha Soomaaliya ay u furan yihiin Yemen.
“Waxaan halkan ku sheegay hal carab oo Carabta ah oo hadda ku sugan xaalad adag, Yemen.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan sii wado mahadnaqa isaga oo jooga Soomaaliya muddo labaatan iyo tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaanay ku yaboohaysaa ereyga mahadnaqa dadka reer Yaman, taas oo ay ku dheceen dagaal qallafsan oo nadiif ah,” ayuu yiri.
Hase yeeshee, wuxuu ku sii daray hadalkiisa, inkasta oo Yemen aysan ka qayb-galin shirka, “Haa, Yaman ma ilaawi doono shaqooyinka bani’aadamnimada ee ah midka hela malaayiin iyo badh milyan oo Soomaali ah iyo xarumo kale oo Carbeed aan awoodin inay helaan.
“Albaabada Soomaaliya waxay u furan yihiin Yemen, waad ku mahadsantihiin Yemen, Ilaahayna wuxuu badbaadiyey dadkiisa ka soo gudbay fowdo iyo dagaal,” ayuu yiri.